Finca Colibri - I-Airbnb
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguUmberto
I-bungalow entsha yangoku enembono ekhethekileyo yeemangrove ezisuka eBajia de Muerte bay, esembindini wolondolozo lwendalo. I-bungalow ibucala kakhulu kwaye izolile. Yimizuzu nje embalwa ngemoto ukuya kulwandle olulandelayo. Ungalindela ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela lepanoramic yanamhlanje kunye nebhedi ekhululekile kakhulu yenkosi. Ngesicelo, sinokuthi siququzelele uhambo lwephenyane ukuya eziqithini, yoga, nokukhwela amahashe kunye nohambo lokuloba. Isidlo sakusasa ngentlawulo
I-bungalow entsha eyenziwe ngezixhobo zangoku. I-terrace ebanzi yeyona ndawo ifanelekileyo yokunandipha ukuthula kwaye umamele nje indalo. Iifestile ezinkulu, ezibonakaliswe ngaphandle, kwigumbi lokuhlala kunye nendawo yokuhlambela zivumela umbono ocacileyo wembono emangalisayo. INetflix yasimahla ilungele ukuzonwabisa kwakho. I-swimming pool ifumaneka kwindlu enkulu kwaye inokusetyenziswa ngokucwangciswa.
I-bungalow ibekwe kumbindi weparadesi yendalo. Yimizuzu nje embalwa ngemoto ukuya kunxweme oluhle lwesanti, iPlaya Hermosa. Idolophu encinci yaseBoca Chica inikezela ngohambo lokuhamba ngesikhephe ukuya kwiziqithi ezincinci ezinamanxweme eparadesi. Indlela yokukhwela intaba enembono entle yehlathi ikhokelela ngokuthe ngqo kwi-bungalow yakho ukuya kwi-mangroves. Unokuphinda uqalise ukhenketho ngehashe ngqo ukusuka kwi-bungalow yakho ukuya kwiilwandle ezifihlakeleyo.
Sihlala kufutshane kakhulu kwaye sikhona ngenxa yakho.